China Sodium Sulfite Kugadzira uye Fekitori | Musoro
Chitarisiko uye chitarisiko: chena, monoclinic kristaro kana hupfu.
Nzvimbo yakanyunguduka (℃): 150 (kuparara kwemvura)
Kuwanda kwehukama (mvura = 1): 2.63
Molecular fomura: Na2SO3
Molecular Kurema: 126.04 (252.04)
Solubility: Inonyungudika mumvura (67.8g / 100 mL (manomwe mvura, 18 °C), isina insoluble mu ethanol, nezvimwe.
Nzvimbo yakanyunguduka (℃): 150 (kurasikirwa kwemvura kuwora)
Solubility: Inonyungudika mumvura (67.8g / 100 mL (manomwe mvura, 18 ° C), isina insoluble mu ethanol, nezvimwe.
Sodium Sulfite iri nyore kurukwa uye yakasanganiswa kuti ive sodium sulphate mumhepo.Kurasikirwa kwemvura yekristaro pa150 ℃. Mushure mekupisa, inonyungudika kuita musanganiswa we sodium sulfide uye sodium sulfate. Kuwanda kwechinhu chisina anhydrous chinhu 2,633. hydrate uye haina shanduko mune yakaoma air.Heat kuora uye chizvarwa chesodium sulfide uye sodium sulfate, uye yakasimba acid kuonana kuora mune inoenderana salts uye kusunungura sulfur dioxide.Sodium sulfite ine yakasimba kudzora, uye inogona kudzikisa ions emhangura kune cuprous ions ( sulfite inogona kuumba zvivakwa zvine cuprous ions uye kugadzikana), uye inogona zvakare kudzikisa isina kusimba oxidants senge phosphotungstic acid.Sodium sulfite uye yayo hydrogen munyu inogona kushandiswa kubvisa peroxides ye ether zvinhu murabhoritari (wedzera shoma mvura, unomutsa iyo kuita nehurema hunyoro uye kupatsanura mvura, iyo ether rukoko rwakaomeswa nekukurumidza lime, kune kumwe kugadziriswa nezvakaderera zvinodiwa) .Inogona kutenderedzwa nehydrogen sulfide.
Chikamu cheiyo reaction equation:
H2SO3 + Na2CO3 = = nyora Na2SO3 + CO2 + H2O
2 nahso3 = = delta = = Na2SO3 + H2O + SO2 nyora
3 na2so3 hno3 + 2 + 2 = = = = 3 na2so4 hapana kunyora + H2O
3. Icho kupisa:
Na2SO3 + 3 h2s = = = = 3 masara + Na2S + 3 h2o 
Iyo sodium carbonate solution inopisa kusvika ku40 ℃ uye yakaguta nesarufa dioxide, ipapo yakaenzana iyo sodhiyo carbonate solution inowedzerwa, uye mhinduro yacho yakasimbiswa pasi pemamiriro ekudzivirira kusangana nemhepo.
ZVINHU ZVAKAWANDA (AS PB):
1. Mushure mekunyungudika, kujekesa uye kusefa kwepamusoro-soro, iyo sarufa inowedzerwa kune sarufa yevira nepombi yesarufa.
2. Mushure mekumanikidzwa kwemhepo, kuomeswa nekucheneswa, sarufa moto unopiswa uye sarufa inopiswa kuti ibudise SO2 gasi (gasi remoto).
3. Ivira remoto rinotonhodzwa nehari yekurasa kuti ivhure hutsi, uyezve ndokupinda mune desulfurization reactor. Iyo sublimation sarufa iri mugesi inobviswa, uye iyo yakachena gasi ine 20.5% SO2 zvemukati (vhoriyamu) inowanikwa, uye ndokuzopinda mushongwe yekumwa.
4, soda ine kumwe kushushikana kweyeye, uye sarufa dioxide gasi yekuita kuti uwane sodium bisulfite solution.
5, sodium sulfite hydrogen sodium solution ne caustic soda neutralization kuti uwane sodium sulfite solution.
6, Sodium sulfite mhinduro mune iyo concentrator, uchishandisa zvakapetwa mhedzisiro kuenderera kwevasungwa process.Mvura inopwa mhepo uye kusimiswa kune ine sodium sulfite makristasi anowanikwa.
7. Isa iyo concentrator inokodzera zvinhu mukati mecentrifuge kuti uone yakasimba-mvura yekuparadzanisa. Iyo yakasimba (yakanyorova sodium sulfite) inopinda mune yekufema mweya, uye chigadzirwa chakapedzwa chakaomeswa nemhepo inopisa.
Ivo amai doro rinogadziriswazve kune alkali yekuparadzira tangi kuti ishandise zvakare.
Flowchart yeSodium Sulfite
1) Inoshandiswa kutsvaga kuongorora uye kutsunga kweteliurium uye niobium uye kugadzirirwa kwesarudzo yekugadzirisa, inoshandiswawo sekuderedza mumiririri;
2) Inoshandiswa seyakagadzirwa nevanhu fiber inogadzikana, machira evhenji mumiririri, mugadziri wemifananidzo, kudhaya uye kuchenesa deoxidizer, kuravira uye dhayi kudzikisa mumiririri, bepa lignin rinobvisa, nezvimwe.
3) Inoshandiswa seyakajairwa analytical reagent uye photosensitive resistor zvinhu;
4) Reductive bleaching agent, iyo ine blekning maitiro pane chikafu uye yakasimba inhibition mhedzisiro pane oxidase muzvirimwa chikafu.
5) Indasitiri yekudhinda uye yekudhaya se deoxidizer uye bleach, inoshandiswa mukubika kwemachira akasiyana ekotoni, inogona kudzivirira oxidation yemuno yekotoni fiber uye inokanganisa iyo fiber simba, uye nekuvandudza kuchena kwechinhu chekubika. Indasitiri yemifananidzo inoishandisa se mugadziri.
6) Inoshandiswa neindasitiri yemachira seyakagadzika tambo dzakagadzirwa nevanhu.
7) Iyo indasitiri yemagetsi inoshandiswa kugadzira photosensitive resistors.
8) Yemvura indasitiri yekurapa ye electroplating mvura yakasviba, kurapwa kwemvura yekunwa;
9) Inoshandiswa se bleach, inochengetedza, inosunungura mumiririri uye antioxidant muindasitiri yezvikafu.Iyo inoshandiswawo mukugadzira mishonga uye sechinhu chinodzora mukugadzirwa kwemiriwo isina mvura.
10) Inoshandiswa kugadzira cellulose sulfite ester, sodium thiosulfate, organic makemikari, yakasviba micheka, nezvimwewo, zvakare inoshandiswa sekudzora mumiririri, inochengetedza, dechlorination mumiriri, nezvimwe.
11) Rabhoritari inoshandiswa kugadzirira sarufa dioxide
Iva nemakore anopfuura gumi ruzivo rwehunyanzvi mukugadzirwa kweSodium Sulfite;
Njodzi dzehutano: kumeso, ganda, mucous membrane kutsamwa.
Njodzi dzezvakatipoteredza: njodzi kune zvakatipoteredza, zvinogona kukonzera kusvibiswa kumatumbi emvura.
Njodzi yekuputika: chigadzirwa hachipisi uye chinotsamwisa.
Matanho erubatsiro rwekutanga
Ganda kuonana: bvisa mbatya dzakasviba uye sukurudza nemvura yakawanda yekuyerera.
Kutarisana kwemaziso: Simudza maziso ako uye sukurudza nemvura inoyerera kana munyu. Enda kuna chiremba.
Inhalation: kure nechiitiko kuenda kumhepo nyowani Ipa oxygen kana uchinetseka kufema enda kuna chiremba.
Kudya: inwa mvura inodziya yakakwana kukonzeresa kurutsa. Enda kuna chiremba.
Matanho emoto ekudzivirira
Huturu hunhu: hapana chakakosha kupisa uye kuputika hunhu.High kudziya kwekuora kunogadzira zvine chepfu sulphide utsi.
Chinhu chinokuvadza chemoto: Sulphide.
Nzira yekudzimisa moto: Vashandi vemoto vanofanirwa kupfeka muviri wese - zvipfeko zvinoratidza, moto kurwa mudenga. Kana uchidzima moto, fambisa chigadziko kusvika pazvinogona kubva panzvimbo yemoto uchienda kunzvimbo yakavhurika.
Emergency mhinduro yekudonha
Emergency kurapwa: tsaura yakasviba nzvimbo yekudonha uye kudzora kupinda Zvinokurudzirwa kuti vashandi ve emergency vanofukidza masiki eguruva (chivharo chizere) uye magasi masutu.Dzivisa guruva, nyatso kutsvaira, kuisa mumabhegi uye kuendesa kunzvimbo yakachengeteka. Inogona zvakare gezwa nemvura yakawanda uye uchinge wakasvinudzwa muchirongwa chemvura yakasviba.Kana paine huwandu hwakawanda hwekudonha, vhara nemapepa epurasitiki uye kanivhasi.Collesa, dzokororazve kana kuendesa kunzvimbo yekurasa marara.
Kushanda kurasa uye kuchengetedza
Mashandiro ekuchengetedza: oparesheni isina mweya, simbisa kufefetedza. MaOperator anofanirwa kuve akadzidziswa uye kunyatsoteedzera mashandiro. MaOperator anokurudzirwa kupfeka wega-kubvisa firita masiki, kupfeka makemikari ekuchengetedza magirazi, kupfeka anti-chepfu yekuzadza hovhorosi, uye kupfeka magurovhosi erabha. .Avoid guruva.Dzivisa kusangana neacids.Handle zvishoma kudzivirira kurongedza kutakura.Equiped ne leakage emergency emergency equipment.Midziyo yezviratidzo inogona kuchengetedza zvinhu zvinokuvadza.
Kuchengetedza kwekuchengetedza: Chengetera mudura rinotonhorera, rinofefeterwa nemhepo.Ramba uchibva pamoto uye kupisa.Inofanira kupatsanurwa kubva kuacid uye kumwe kuchengetwa, usasanganise kuchengetedza.Usagara kwenguva refu.Nzvimbo yekuchengetera ichapihwa nezvinhu zvakakodzera kubata kuvuza.
Kubata kudzora / kuchengetedza pachako
Kudzora kweinjiniya: maitiro ekugadzira akavharwa, uye mweya unosimbiswa.
Kufuridzira system yekudzivirira: kana guruva mumhepo richidarika muyero, iwe unofanirwa kupfeka unozvitsveta-firita guruva mask.Kana pane emergency kununurwa kana kubuda, mweya wekufema unofanirwa kupfekwa.
Dziviriro yeziso: pfeka makemikari ekuchengetedza magirazi.
Kudzivirirwa kwemuviri: pfeka anti-chepfu pemeation yebasa mbatya.
Kudzivirirwa kwemaoko: pfeka magurovhosi erabha.
Kumwe kudzivirirwa: chinja mbatya dzebasa nenguva. Ramba uine hutsanana.
Kugadzikana uye kugadzirisa
Zvinorambidzwa makomponi: yakasimba asidi, aluminium, magnesium.
Kuora zvigadzirwa: sulfur dioxide uye sodium sulfate
Mimwe mhedzisiro inokuvadza: chinhu chinokuvadza kune zvakatipoteredza, kunyanya kutariswa kunofanirwa kubhadharwa kune kusvibiswa kwemvura.
Yekufambisa Yekuchengetedza: Iko kurongedza kunofanirwa kuve kwakakwana uye kurodha kunofanirwa kuve kwakachengeteka Iva nechokwadi chekuti mudziyo haudonhedze, kudonha, kudonha kana kukuvara panguva yekufambisa. Izvo zvakanyatsorambidzwa kusanganiswa neacids uye anodyiwa makemikari. Kufambisa kunofanira kuchengetedzwa kubva kusvikirwa nezuva, kunaya uye kupisa kwakanyanya Imotokari inofanirwa kucheneswa kwazvo mushure mekufambisa.
Pashure: Sodium Metabisulphite
Zvadaro: Sodium Bromidhi
Hydrosulfite De Sodium, Hydrosulfite, Karusiyamu Bromide Anhydrous, Natrium Hydrosulfite, Karusiyamu Bromide Solution, Karusiyamu Bromide Liquid,